महिलाहरुको जन्म महिनाबाट थाहा हुन्छ उनको चरित्र, कुन महिनामा जन्मेका युवतीहरु कस्ता ? जानी राखौ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/महिलाहरुको जन्म महिनाबाट थाहा हुन्छ उनको चरित्र, कुन महिनामा जन्मेका युवतीहरु कस्ता ? जानी राखौ
बिशेषत: महिलाको स्वभाव र सरलपनले आकर्षित गराउने खाल्को हुन्छ । महिलाहरु आफ्नै परिवेश अनुसारको सिको गर्ने पनि गर्दछन तर उनीहरुको स्वभाव जन्मेको महिना अनुसार पनि निर्धारण हुने ज्योतिषीय तथ्य पनि फेला परेको छ कुन महिना जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने केहि कुराको बारेमा पत्ता लागेको केहि तथ्यहरु:-
चैत – यो महिनामा जन्मिएका महिला चलाख र चतुर हुन्छन् । सुन्दर हुनुका साथै चञ्चल स्वभावका कारण अरुलाई छिटो आकर्षण गर्छन् । धनबाट पनि उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् । कहिलेकाहिँ उनीहरूमा क्रोध हावी हुनाले समस्या पनि ल्याएको हुन्छ
आज जननेता मदन भण्डारीको ६९ औँ जन्म जयन्ती मनाइँदै
हाम्रो हातमा नक्सा‚ भारतको हातमा जमिन नहोस्